‘गाँजाको बोटमा पैसा फलेको छ, त्यसलाई टिप्‍ने हो’ – पूर्वमन्त्री तामाङ - Punhill Online‘गाँजाको बोटमा पैसा फलेको छ, त्यसलाई टिप्‍ने हो’ – पूर्वमन्त्री तामाङ - Punhill Online
२८ फाल्गुन २०७६, बुधबार २१:२५ मा प्रकाशित (3 हप्ता अघि)
गाँजाको नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्‍मा दर्ता गराउनुभएको छ। यसको खास उद्देश्य के हो ?
हामी वेद, पुराण हेर्‍यौं भने पनि थाहा पाउँछौं– भगवान शिवलाई मन पर्ने गाँजा एक उत्कृष्ट वनस्पति हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालगायत लागूऔषधसम्बन्धी महासन्धि पारित गर्दा नेपाल पनि यसको पक्षराष्ट्र बन्यो। यो महासन्धि अनुमोदन गर्दा नेपालले गाँजाको परम्परागत प्रयोग र औषधिको लागि हामी खुल्ला गर्छौं भनेर रिर्जभेसनसहित समर्थन गरेको थियो।
त्यतिबेला नै गाँजालाई व्यवस्थित बनाउने गरी कानून बनाउनुपर्ने थियो। तर, उल्टो भयो। नेपालले कानून बनाएर गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगायो। अहिले हामीले धेरै तह र तप्कामा छलफल, अध्ययनपछि विधेयक ल्याएका हौं। नेपालमा पाइने गाँजा विश्वमै पाइने गाँजामध्ये उत्कृष्ट छ। यो गुणात्मक छ। यो औषधीको लागि बहुउपयोगी छ। यसको आर्थिक मूल्य भएकाले यसमा अथाह आर्थिक सम्भावना छ। यसको उत्पादनलाई कानूनी रुपमा वैधता दिए राष्ट्रको कल्याण हुन्छ। राष्ट्रको समृद्धिको प्रस्थानविन्दुको गाँजालाई पहिल्याएपछि हामीले हरेक किसान धनी हुन्छन् भन्ने कुरा मनन गर्‍याे। अर्थतन्त्रको जग बसाउन गाँजाबाट सम्भव छ भन्ने निश्कर्षमा पुगरै विधेयक दर्ता गराएका हौं।
तपाईं पूर्वकानूनमन्त्री, तपाईंकै पार्टीको सरकार छ। सामान्यतया सरकारले संसद्‍मा विधेयक लैजाने गर्छ, तपाईंले चाहिँ गैरसरकारी विधेयक भनेर किन दर्ता गराउनुभो ?
पार्टीका उच्चतहका नेताहरूसँग हामीले छलफल गरेका छैनौं, तर उहाँहरू यसबारे जानकार हुनुहुन्छ। अरू धेरै नेताहरूसँग हामीले छलफल गरेका छौं। यसबारे वर्षौंदेखि छलफल भइरहेको थियो। अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको थियो। रिसर्चले के देखायो भने गाँजाले नेपालको अर्थतन्त्रमा गेम चेन्जरको भूमिका खेल्न सक्छ। लाख, करोड र अर्बमा होइन, गाँजाको हिसाब खर्बमा हुन्छ।
अमेरिका र क्यानडामा मनोरञ्जनका लागि गाँजा खुला गरिएको छ। हामीले त औषधिका लागि गाँजाको वैधानिक उत्पादनमा विशेष जोड दिएका छौं। हामीले केन्द्र सरकारले कानून बनाइदिने, स्थानीय सरकारले नै अनुमति दिने, गुण परीक्षण गर्ने, ल्याब टेष्ट गर्ने भनेर भनेका छौं।
धेरैले त यसले नेपालीलाई लागुऔषधको दलदलमा फसाउन सक्छ भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् नि ?
यस्तो चिन्ता गर्ने साथीहरूलाई म संसद्‍मा दर्ता गरेको विधेयक हेर्न अनुरोध गर्दछु। यो संसदको वेबसाइटमा छ। कसैलाइ चाहिए म इमेल पनि गरिदिन्छु। कानून बनाउँदा हामी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर बनाउनेछौं। दफादफामा यसको ‘मिसयुज’ हुन नदिने विषयमा ध्यान दिइन्छ। हिजो लामो समयदेखि गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएको कारणले यस्तो धारणा बनेको हो। तर, यो खाने होइन, उत्पादन गरेर बेच्ने हो। २१ वर्ष उमेर पुगेका वयस्कहरूले मात्र डाक्टरको सिफारिसअनुसार के रोग लागेको हो र त्यसको औषधि हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर मात्र प्रयोग गर्ने भनेका छौं। गाँजा नेपालीले खाएर उडाउने होइन, डलर कमाउन विश्व बजारमा पठाउने हो। मार्केटको कुनै चिन्ता छैन। यसको माग यति छ कि हामीले उत्पादन गर्न मात्र सक्नु पर्‍यो।
गाँजा उत्पादनलाई नेपाली कानूनले मात्रै वैधानिकता दिएर नहुने रहेछ। यसको लागि त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पनि छन् नि होइन ?
जतिबेला गाँजासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि बन्यो, त्यतिबेला हामीले परम्परागत प्रयोग र औषधिका लागि प्रयोग गर्छौं भनेकै हौ। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै २०१९ जनवरीमा गाँजालाई लागुऔषधको सूचीबाट हटाएर औषधिको सूचीमा राख भनेको छ। विश्वभर बन्ने औषधिलाई प्रमाणित गर्ने आधिकारिक संस्था नै विश्व स्वास्थ्य संगठन हो। अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघमा यसबारे बहस भइरहेको छ। नेपालमा यसबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल शुरू भएको छ। अहिले कोरानाका कारण यसबारे शुरू भएको छलफलले तीव्रता पाएको छैन।
विश्वमै सबभन्दा पहिले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएको अमेरिकामा प्रान्तीय सरकारले मात्र यसको अनुमति दिँदारहेछन्। ७० वटा देशमा गाँजा खेतीले मान्यता पाएकोमा सबै संघीयतामा गएका देश रहेछन् र सबैमा प्रान्तीय सरकारले मात्र गर्दा रहेछन्। नेपालमा यसको उत्पादन र नियमन कसले गर्ने ?
नेपाल एउटा सानो हिमाली मुलुक हो। प्रकृतिले हामीलाई धनी बनाए पनि हामीले आफ्ना स्राेतसाधन प्रयोग गर्न सकेनौं। त्यसकारण विश्वमा गरिब राष्ट्रको सूचीमा छौं। गाँजाले हामीलाई विश्वकै धनी राष्ट्रका जनता बनाउन सक्छ।
गाँजा हिमाल, पहाड र तराई जताततै उत्पादन हुन्छ। नेपालको हरेक स्थानमा गाँजा उत्पादन हुन सक्छ। यसले सबै क्षेत्रका किसानलाई लाभ दिन्छ।
हो, अमेरिकामा प्रान्त सरकारले मात्र गाँजा उत्पादन गर्छ। उनीहरूले अर्बौं डलरको गाँजा उत्पादन गर्छन्। अमेरिका र क्यानडामा मनोरञ्जनका लागि गाँजा खुला गरिएको छ। हामीले त औषधिका लागि गाँजाको वैधानिक उत्पादनमा विशेष जोड दिएका छौं। हामीले केन्द्र सरकारले कानून बनाइदिने, स्थानीय सरकारले नै अनुमति दिने, गुण परीक्षण गर्ने, ल्याब टेष्ट गर्ने भनेर भनेका छौं।
विधेयकमा प्रत्येक परिवारलाई ६ बोट गाँजा उत्पादनका लागि स्वीकृति लिनु नपर्ने भन्नु भएको छ। त्यो के का लागि ?
त्यो ६ बोटको ठूलो अर्थ छ। किनभने त्यो हरेक घरका लागि औषधि हो। बिहान एक गिलास गाँजाको जुस खाने हो भने क्यान्सर लाग्नबाट बचाउँछ। गाँजाको वरिपरि साग तरकारीमा कीरा लाग्दैन। घाउ, चोटपटक लाग्यो भने गाँजाको पात निचोरेर घाउमा रस हाल्ने हो भने रगत बग्नबाट रोकिन्छ। ६ बोटकै कुरा गर्दा थाइल्याण्डको उदाहरण हेरौं। अहिले थाइल्याण्डमा एक बोट गाँजाबाट बर्सेनि सात हजार अमेरिकी डलर कमाइरहेका छन्। पोर्चुगलमा पनि प्रत्येक परिवारलाई ६ बोट गाँजा बिनाअनुमति उत्पादन गर्न दिइएको छ। त्यहाँका मानिसले ६ बोटबाटै दुई/चार लाख नेपाली रूपैयाँ बराबरको आम्दानी गरिरहेका छन्। यो त वर्षमा तीनपटक लगाउन सकिन्छ।
गाँजाले पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावना बढाउँछ ?
गाँजा मनोरञ्जनका लागि र सबै नेपालीका लागि खुला गर्ने होइन। यो कानून पारित भयो भने हामीले गाँजा क्यासिनो मोडेलमा मनोरञ्जनका लागि पर्यटकलाई खुला गर्ने तर, नेपालीको हकमा यो कुरा प्रतिबन्धित नै रहनेछ। हामी भिजिट नेपाल भनेर २० लाख पर्यटक भित्र्याउन मिहिनेत गरिरहेका छौं। गाँजा सेवन गर्न आउने पर्यटक नै ठूलो संख्यामा वृद्धि हुनेछन्।
नेपालको गाँजा विश्वमै नम्बर एक मानिन्छ। यो वैधानिक भयो भने विश्व बजारमा बेचिने भनेको नेपाली ब्राण्डका गाँजा नै हो। गाँजा खाएर अहिलेसम्म कुनै रोग लागेको प्रमाणित भएको छैन। गाँजा खाएर अहिलेसम्म विश्वमा कसैको मृत्यु भएको छैन। नेपालमै गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुअघि गाँजाबाट ठमेल एरियाबाट मात्रै ६–७ करोड आम्दानी हुन्थ्यो। त्यतिबेला डलरको भाउ ६ रूपैयाँ थियो। यसबाट अनुमान लगाउन सक्छौं, गाँजा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि के हो भन्ने कुरा। अहिले सिंहदरबार परिसरको वैद्यखानाले विदेशबाट गाँजा मगाएर औषधि बनाइरहेको छ। अब गाँजाबाट नेपालले औषधि बनाउने र त्यो औषधि अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा पठाउने हो।
गाँजा उत्पादनका लागि उत्कृष्ट स्थानको पहिचान भएको छ ?
कुनैबेला नेपालको पस्मिना, ह्याण्डीक्राफ्ट र गलैंचाबारे पनि डलरकै सपना देखाइन्थ्यो नि ?
यो नेपाललाई प्रकृतिले दिएको वरदान हो। कुनैबेला सिंहदरबारस्थित वैद्यखानामा गाँजाबाट औषधि बन्थ्यो। पछि त्यसलाई बन्द गरियो। गाँजा मिसिएका औषधि बनाउने फर्मुला हामीसँग छ। त्यो विश्वमा कसैसँग छैन। त्यो हाम्रो ज्ञान हो। अब हामीले त्यो फर्मुला दर्ता गर्नुपर्छ। तपाईंलाई थाहा छ, अहिले सिंहदरबार परिसरको वैद्यखानाले विदेशबाट गाँजा मगाएर औषधि बनाइरहेको छ। अब गाँजाबाट नेपालले औषधि बनाउने र त्यो औषधि अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा पठाउने हो।
तपाईंले भाङ (गाँजा)को बोटमा समृद्धि देख्नुभएको हो ?
गाँजाको बोटमा पैसा फलेको छ, त्यो टिप्ने हो। प्रत्येक नेपालीको भित्री आँखाले गाँजाको बोटमा डलर देख्न सक्नुपर्छ। नेपाली समृद्ध हुने आधार हो गाँजा। गाँजाले वैधानिकता पाए नेपालीले आजभन्दा राम्रो जीवन पाउँछन्। त्यसकारण गाँजा बुझौं, बहस चलाऔं र यो विधेयक पास गरौं। अनि गरिबीबाट माथि उठौं ।
प्रस्तुतिः मञ्जु कार्की । देखापढीबाट